Afghanistan: Taliban Xaggee Ayay Ka Heshaa Hubka Casriga Ah Ee Haysato ? | Gaaroodi News
Afghanistan: Taliban Xaggee Ayay Ka Heshaa Hubka Casriga Ah Ee Haysato ?
Muuqaal dhawaan lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dagaalyahannada Daalibaan oo u muuqda inay yihiin astaanta xayaysiis ooo qalabka Mareykanka, gaar ahaan (qalabka milatariga) – helicopterka nooca loo loo yaqaan Black Hawk – ayaa ka kacaysay gegida dayuuradaha ee Kandahar.
Diyaaradda oo afar af leh ka sii kacaysay barta diyaaraduhu ka haadaan ee garoonkaas, oo ahayd hab dhoollatus ah, waxa ay dunida u dirtay farriin ah: in Taalibaan aanay keliya ahayn koox askar ah oo sita qoryaha darandooriga u dhaca ee Kalashnikov oo saaran baabuur kuwa xamuulka ah.
Meel kale, tan iyo markii Kabul laga tuuray 15-kii Ogosto kooxda Islaamiga ah ee mayalka adag, dagaalyahannada Daalibaan waxaa lagu sawiray iyagoo muujinaya hub fara badan iyo gaadiid dagaal oo Mareykanku sameeyay.
Qaarkood ayaa lagu arkay iyagoo wata qalab dagaal oo dhammeystiran baraha bulshada mana la kala sooci karo ciidammada kale ee gaarka ah ee ka kala yimid daafaha dunida. Ma jirin wax gadh dheer ah, iyo hubaal hub daxalaystay sidii laga fili kareyey jabhad duurka ku jirtay.
Waxay qabsadeen hubkan ka dib markii ciidammo ka tirsan Difaaca Qaranka iyo Xoogagga Amniga Qaranka (Ands) ay hal magaalo isu dhiibeen.
Qaar ka mid ah baraha bulshada ayaa sheegay in tani ay Taalibaan ka dhigtay kooxda kaliya ee xagjirka ah ee leh ciidan cirka
Imisa diyaarado dagaal ayay haysataa Taliban?
Ciidanka Cirka ee Afgaanistaan ayaa hawlgalinayay 167 diyaaradood, oo ay ku jiraan helikobtarro iyo diyaarado, dhammaadkii bishii June, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Kormeeraha Guud ee Maraykanka ee Dib-u-dhiska Afghanistan (Sigar).
Laakiin ma cadda inta ay yihiin 167 -kan Daalibaan ee ay dhab ahaantii qabsadeen. Sawirrada dayax -gacmeedka ee garoonka Kandahar, oo ay BBC -da siisay Planet Labs, ayaa muujinaya tiro ka mid ah diyaaradaha milateriga Afghanistan oo taagan dhabbada diyaaradaha .
Sawir laga soo qaaday lix maalmood kadib markii ay magaalada qabsadeen Daalibaan ayaa muujinaya shan diyaaradood-ugu yaraan laba helicopter MI-17, laba Black Hawks (UH-60) iyo helikobtar saddexaad oo iyana noqon kara UH-60, sida uu sheegay Angad Singh, oo ah khabiir dhinaca duulista milatariga ah oo ka tirsan Mu’asasada Cilmi-baadhista ee fadhigeedu yahay Delhi.
Taas bedelkeeda, 16 diyaaradood – oo ay ku jiraan sagaal Black Hawks iyo laba helikobtarro MI -17 ah iyo shan diyaaradood oo baalal leh – ayaa lagu arki karaa sawir kale oo dayax -gacmeed oo la qaaday 16 -kii julaay.
Waxay la macno tahay in qaar ka mid ah diyaaradahan ama dalka laga saaray ama loo wareejiyay saldhigyada kale ee hawada.
Daalibaan ayaa sidoo kale qabatay sagaalka xarumood ee Afgaanistaan, oo ay ku jiraan kuwa Herat, Khost, Kunduz iyo Mazar-i-Sharif-laakiin ma cadda inta diyaaradood ee ay halkaas ka qabsadeen maadaama sawirrada dayax-gacmeedka aan laga heli karin garoomadaas.
Dagaallamayaasha Daalibaan iyo warbaahinta maxalliga ah ayaa soo dhigayay sawirrada diyaarado lala wareegay iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee garoomadaas.
Laakiin sidoo kale waxaa jira soo jeedin ah in diyaaradaha qaar laga soo saaray Afghanistan ka hor inta aysan ku dhicin gacanta dagaalyahannada fallaagada ah. Falanqaynta sawirrada dayax-gacmeedka ee laga qaaday 16-kii Ogosto garoonka diyaaradaha Termez ee Uzbekistan ayaa muujinaya in ka badan labaatan diyaaradood oo helicopter ah, oo ay ku jiraan MI-17, MI-25, Black Hawks iyo sidoo kale dhowr A-29 light-attack iyo C-208, sida uu sheegtay Delhi- khabiir ku takhasusay duulista hawada oo aan rabin in la magacaabo.
Khubarada ku xeel dheer arrimaha amniga ee CSIS ayaa sheegaya in diyaaradahan iyo helikobtarro ay u badan tahay inay ka yimaadeen Ciidanka Cirka ee Afghanistan.
Yay ka dhaxleen hubkan?
In kasta oo ay jiraan su’aalo ku saabsan awoodda hawada ee Taliban, haddana khubaradu waxay isku raaceen inay leeyihiin khibrad ay ku maareeyaan qoryaha casriga ah, iyo kuwo baabuurta. Waxaana jira kuwa badan oo Afgaanistaan jooga oo hawshaas yaqaan.
Intii u dhaxaysay 2003 iyo 2016, Mareykanku wuxuu soo dejiyay qalab militari oo aad u badan ciidammada Afgaanistaan oo ay la dagaallameen: 358,530 qori oo noocyo kala duwan leh, in ka badan 64,000 qoryaha darandooriga u dhaca, 25,327 bam-gacmeedyo iyo 22,174 Humvees (gawaarida dhulka), sida laga soo xigtay Warbixinta La Xisaabtanka Dowladda Mareykanka.
Ka dib markii ciidamada Nato ay soo afjareen kaalintii dagaal ee 2014, ciidanka Afghanistan waxaa loo xilsaaray inay sugaan amniga dalka. Markii ay la halgamaysay sidii looga hortagi lahaa Taalibaan, Mareykanku wuxuu siiyay qalab dheeri ah wuxuuna beddelay qalabkii militariga ee gaboobay.
Waxay bixiyeen ku dhawaad 20,000 oo qori M16 ah sanadkii 2017 oo kaliya. Sanadihii xigay, waxay ugu yaraan ku deeqeen 3,598 qoryaha M4 iyo 3,012 Humvees oo ka mid ah qalabka kale ciidamada amniga Afgaanistaan intii u dhexeysay 2017 iyo 2021, sida uu sheegay Sigar.
Ciidanka Afgaanistaan ayaa sidoo kale haystay gawaadhida xoog -ku -dirirka ee guurguura, kuwaas oo ay u adeegsadeen hawl -galkooda waqti gaaban. Shaqaalahan 4×4 waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado dadka ama qalabka